Tag: Ekwensu | Martech Zone
Ternyaahụ ka mụ na Brad Shoemaker nwere mkparịta ụka dị ukwuu, onye ọkachamara n'ihe gbasara mgbasa ozi mpaghara nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na-anwa ịdọrọ redio n'ime afọ dijitalụ. Ọ dabara na otu enyi ọzọ, Richard Sickels, banyere n'ọfịs ahụ. Richard nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme na redio. Anyị na-ekwu okwu banyere ụlọ ọrụ redio ma m gara n'ihu na-eche banyere ya n'abalị ụnyaahụ. Ka ire ikuku na-aga n'ihu na-ada ma alaeze redio na-aga n'ihu
Ijikọta Digital Marketing na Nkwado gị
Tọzdee, Ọktoba 11, 2012 Wednesday, October 10, 2012 Thomas Stern
Nkwado ahia ahia na-eweta uru dị oke gafere akara ngosi na azụmaahịa weebụsaịtị. Ndị ọkaibe nwere ọkaibe taa na-achọ inweta ọfụma na nkwado, otu ụzọ a ga-esi mee nke a bụ iji uru nke njikarịcha njin ọchụchọ. Iji meziwanye nkwado ahịa na SEO, ịkwesịrị ịchọpụta ụdị nkwado dị iche iche dị na njirisi isi dị mkpa iji nyochaa ọnụahịa SEO. Omenala ọdịnala - Bipute, TV, Nkwado Radio site na mgbasa ozi ọdịnala na-abịa
Douglas Karr na Edge nke Web Radio
Tuesday, August 7, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Nwere ezigbo oge gị na enyi Erin Sparks na Edge nke redio redio (denye aha na iTunes) na Satọdee gara aga. Anyị tụlere ụfọdụ infographics, facebook akwụpụtara nsonaazụ ọchụchọ, atụmatụ ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta. Erin na ndị otu ya na-ewepụta ihe nkiri a kwa izu ma na-ebi na Indianapolis. I nwekwara ike ige nti site na ibe WXNT. Ọ bụrụ n’inweghị ohere ige ntị na ngalaba - nke a bụ akụkụ otu. Lelee
Ha niile nyere ụfọdụ, ụfọdụ enye ha niile. Daalụ.
Na Mọnde, Nọmba 11, 2008 Tọzdee, Nọvemba 13, 2008 Douglas Karr
Nkwupụta nke Onye isi ala United States nke America na Day Veterans Day, anyị na-asọpụrụ maka ọrụ na ịchụ àjà nke ndị nwoke na ndị nwanyị na-agbachitere nnwere onwe anyị ji obi ike eyi uwe nke United States. Site na ubi na oke ohia nke Europe tisasịrị agha rue oke ohia nke Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, site n'ọzara nke Iraq ruo n'ugwu Afghanistan, ndị nwere obi ike mba nwere nchedo ebumnuche nke Mba anyị, napụta ọtụtụ nde mmadụ
Ige redio na ụzọ m na-arụ ọrụ bụ oge dị jụụ nye m. Na agbanyeghị ịzụ ahịa, abụ m onye na-enwe ọ camụ n'ogige. Mbugharị okporo ụzọ? Enweghị nsogbu… ndị DJ m ga-adọta m ma bido ụbọchị. Ruo ụnyaahụ…. Apụghị m ịkwụsị iche banyere ya. Ana m ege ọmarịcha mgbasa ozi na redio banyere nwa okorobịa anaghị atọ ụtọ ụtọ kọfị. Ihe ndi ozo - Ugwu Ugwu. Ugwu Ugwu? Ugwu Mountain!